Yonke into ofuna ukuyifumana malunga nentlanzi yezembe | Ngeentlanzi
Kukho iintlanzi ezifana nezilwanyana ezinje nge intlanzi yengwenya okanye Iintlanzi, kodwa zikho nezinye iintlanzi ezifana nezinto ezithile ezinje nge intlanzi yesarha kunye nomlinganiswa ophambili kweli nqaku: intlanzi yezembe. Inesisu esandisiweyo ngohlobo lokuba sidale izembe. Baninzi abantu abayifumeneyo ngenxa ye-aquariums zabo kwaye iya iba kwifashoni.
Kule nqaku siza kukufundisa yonke into malunga neentlanzi zezembe.
3 Ukuziphatha kwentlanzi yezembe
Intsapho ye-Gasteropelecidae. Ezi ziintlanzi ezivela eMzantsi nakuMbindi Merika. Kubantu abazithandayo iintlanzi, olu hlobo lufezekile. Inomzimba onzulu omile okwezembe. Ngokuqhelekileyo iyintlanzi encinci eya kuba nayo ubude obumalunga ne-6,5 cm ubuninzi kwaye uhlala uhlala phakathi kweminyaka emi-2 nengu-5 ubudala.
Baziintlanzi ezisebenzayo ukuba basesikolweni ubuncinci i-8 okanye ngaphezulu kweentlanzi. Luhlobo olunomdla kwaye lushukumisayo olufumana udumo phakathi kwabagcini beentlanzi. Zimhlophe ngombala kunye nembonakalo yesilivere. Banomgca omnyama othe tyaba owela umzimba wonke. Imilomo yabo imi phezulu entloko, ngenxa yoko banako ukondla umphezulu.
Luhlobo oluhlala ludidekile nezinye iintlanzi zezembe zezinye iintlobo. Intlanzi yezihlunu eqhelekileyo yinto enzima ukuyinyamekela, kodwa iba ngumceli mngeni kumava anamava.
Indawo yokuhlala yendalo ise Mzantsi Melika eBrazil nakwiindawo apho kufumaneka khona eyona milambo isemazantsi eAmazon. Zihlala zihlala kwiindawo ezinemisinga emincinci kodwa ezixineneyo kwizityalo.
Uhlaza oluninzi uyintandokazi yakhe kuba angazimela phakathi kwawo kwaye azive ekhuselekile. Uhlala uchitha ixesha lakho elininzi kuyo. Baya kushiya kuphela eyona ndawo ininzi xa beziva besoyikiswa okanye betya. Ngamanye amaxesha ziyabonakala ukuphuma emanzini ukuze zizingele izinambuzane eziphaphazelayo.
Zizilwanyana ezizidlayo. Umlomo wayo ubekwe kwinxalenye ephezulu yomzimba kwaye usebenza ukondla umphezulu. Abahlali betya ukutya esele kuwile ezantsi komjelo, kuba bacinga ukuba ikwimeko embi. Bahlala betya kwezo zondliwayo ziwela phezu komhlaba okanye kwezinye iintlobo zeentlanzi ezidada ngaphezulu okanye kufutshane nomphezulu.
Ukutya akusukelayo kukuphezu kwabo, akaze athobe inqanaba lokubamba naliphi na ixhoba. Xa ifunyenwe endle, inokubamba iimpukane zeviniga, imibungu yengcongconi, kwaye nangayo nayiphi na into yokutya esemanzini.
Ukuba sifuna ukuba nayo kwi-aquarium, kufuneka sikhumbule ukuba iya kutya kuphela ukutya okungaphezulu kwayo kwaye ayizukuphila kuphela ngokutya kwe-flake.
Kuya kufuneka unikeze ukutya okulingeneyo okusekwe kuzo zonke iintlobo zokutya. Umzekelo, imibungu yengcongconi kunye neempukane zeziqhamo, kunye neminye imibungu yegazi ephilayo okanye ibrine shrimp inokusebenza njengemithombo elungileyo yeprotheni esempilweni. Ewe akuyomfuneko ukuyondla yonke imihla.
Ukutya kufuneka kwahluka kungekuphela kwizondlo, kodwa nakwinto ephilayo kunye nokutya okufileyo. Sukwenza nje impazamo ngokuyinika izikali.
Ukuziphatha kwentlanzi yezembe
Ukuba siza kuba nayo kwiindawo zokuhlala emanzini kunye nezinye iintlobo zeentlanzi, kufuneka sikhumbule ukuba iya kuba yintlanzi kunye neentlanzi. Esi sesona sizathu esenza ukuba zibekwe kunye nezinye iintlanzi ezinje ngezi. Iindidi zeentlanzi ezinobundlobongela azikhuthazwa. Kwimeko egqithisileyo yokuba babenze bahlala kunye, Kuya kufuneka sibeke isikolo esine-8 okanye nangaphezulu kweentlanzi.
Ukuba siyibeka esikolweni baya kulungelelanisa ngokukhawuleza ebomini ekuthinjweni. Kwakhona, njengoko besesitshilo ngaphambili, baya kuba ziintlanzi ezisebenzayo, babe nobomi obude ngokufanelekileyo. Ezona ntlanzi zibalaseleyo zokuhamba nazo zi-tetras, yeyoku kunye nee-loricars.
Yintlanzi yasebusuku ethanda ukutsiba emanzini. Kukho amaxesha apho inokubonwa ingashukumi phantsi komphezulu wamanzi e-aquarium. Olu lulungelelwaniso oluvela kwindawo yokuhlala yendalo apho ibekwe khona ukuze ikwazi ukutsiba kwaye "ibhabhe" emoyeni ukuze ikwazi ukuzingela izinambuzane ezibhabhayo.
Ziba ziintlobo ezidumileyo kwilizwe le-aquarium kuba ukhathalelo lwabo lulula. Zizilwanyana, xa sele ziqhelanisiwe, ziya kuhlala zihlala zisempilweni. Amanzi kufuneka agcinwe ecocekile kwaye inkqubo ye-aquarium kufuneka ivalwe. Nokuba ubungakanani be-aquarium, kufuneka igcinwe kwaye icocwe rhoqo. Eyona nto iqhelekileyo kukuba izinto eziphilayo ezikhoyo kwi-aquarium zibola kwaye ziqala ukungcolisa imeko-bume.
Inovakalelo ngakumbi kolu hlobo lweemeko. Kuya kufuneka uthathele ingqalelo nobunzima bamanzi. Amanzi kufuneka atshintshwe rhoqo ukugcina imeko intle. Ubuncinci i-25-50% yamanzi e-aquarium kufuneka ibuyiselwe rhoqo kwiiveki ezimbini. Ke, inkqubo yokuqhelanisa ilungile ngakumbi.
Ziyintlanzi enganyangekiyo nezifo ukuba nje itanki iphakathi kwe-15 kunye ne-20 yeelitha ngobukhulu. Ukuba uhombisa i-aquarium ngezityalo ezidadayo kunye nezinto ezininzi Izityalo ze-aquarium baya kuba nombulelo. Kungenxa yokuba kwindawo yabo yendalo banezi meko kwaye bafuna nje ukuziphinda.
Kuyacetyiswa ukuba itanki livalwe ngocoselelo ukuze intlanzi ingawi xa ithe yatsiba. Iimeko zamanzi kufuneka zibe mnene kwaye zibe neasidi ukuze zikhule. Ukucocwa kwe peat kuyacetyiswa. Ngokubhekisele kwi-substrate kunye nokukhanyisa, kunokuba yinto eqhelekileyo ukumodareyitha. Iqondo lobushushu kufuneka libe phakathi kwama-22 nama-27 degrees kunye ne-pH phakathi ko-6 okanye 7,5.
Ndiyathemba ukuba ezi ngcebiso zikunceda ukonwabele intlanzi yezembe.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ngeentlanzi » Intlanzi » Intlanzi yezihlwitha